(Madrid) 21 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay iska diiday fursad ay kula saxiixan kartay difaaca naadiga Tottenham Hotspur ee Danny Rose.
Naadiga Catalan ayaa u baahan daafac garabka bidix oo cusub suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan, waxaana la la xiririinayaa laacibka Augsburg ee Philipp Max iyo midka kooxda Wolfsburg ee Jerome Roussillon.
Sida uu warinayo Wargeyska Sport kooxda Barca ayaa meel iska dhigtay xiisaha uga imaanaya Rose, kaasoo qudhiisu isku bandhigay kooxda reer Spain, xiddiga xulka qaranka England ayaana la safrin kooxdiisa Tottenham ee u baxday kulamada saaxiibtinnimo ee isu-diyaarinta xilli ciyaareedka cusub.
Yeelkeede, kooxda xafidanaysa horyaalka Spain ayaa hoos u dhigtay inay la xiisato 29-sano jirkaan, waxaana ay kooxdu dareensan tahay inay heli karto laacib kaga fiican booskiisa kana da’yar.
Rose, kaasoo sidoo kale la la xiriirinayo Paris Saint-Germain ayaa 37 kulan u saftay kooxda macallin Mauricio Pochettino intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii 2018-19, waxaana ku jiray siddeed kulan oo uu u saftay tartanka Champions League.
Kooxda Spurs ayaa diyaar u ah inay 20 milyan oo gini isaga iibiso xagaagan xiddigii hore ee Leeds United.